Mampisy fifandraisana ny tany lavitra andriana ao Tanzania · Global Voices teny Malagasy
Miaraha aminay hamita ny iraka fampifandraisana ireo tsy afa-nifandray
Voadika ny 03 Desambra 2019 5:11 GMT
Nosoratako taloha kelin'izao ny momba izay ataoko ao amin'ny Basic Internet Foundation mikasika ny fampiatiana dizitaly ary ny Tanjon'ny Fampandrosoana Maharitra, ary satria miditra amin'ny taona fahatelo amin'ilay tetikasa natokana ho an'ireo faritra ambanivohitr'i Tanzania izao izaho zy ireo namako, indreto misy fampahafantarana sy fanavaozana vitsivitsy momba ny asanay. Raha mivoatra ny faritra an-tanàndehibe ao atsimon'i Saharà noho ny fandraisany anjara amin'ny fiarahamonina dizitaly, mbola tavela aoriana kosa ireo faritra ambanivohitra, ary ny Basic Internet Foundation (lavidavitra kokoa, Foundation) dia nanoso-kevitra hanangana ny “Internet lite”– Toerana Ahazoana Vaovao Maimaimpoana any amin'ny vohitra tsirairay..
Inona izany Internet Lite (aterineto maivana) izany ?
Ny Internet lite dia haitao voaporofo ary manome fidirana malalaka amin'ny lahatsoratra, sary ary votoaty, ohatra amin'izany ny horonantsary ara-panabeazana na ara-pahasalamana ao amina lohamilina iray ao an-toerana. Manohana ny fotokevitra Toekarena Sôsialy sy Ifanotronana ilay modelim-pandraharahàna. Ny olona iray mpampiasa aterineto mandoa fahafahana mijery lahatsary mandritra ny 10 minitra dia afaka hanohana 300 mpampiasa aterineto mandritra ny herintaona ho afaka hahazo torohay maimaimpoana.
An-dàlana izao ny tetikasa santatra Internet lite tohanan'i Norveziàna ao Tanzania, ary ny tanjona dia ny handrakotra ireo vohitra lavitra.. Ny fametrahana tetikasa santatra any ambanivohitr'i Afrika atsimon'i Saharà no tanjona voalohany, izay natokana hanaparitahana ny torohay ara-pahasalamana sy ara-panabeazana ao an-toerana. Ilay tetikasa santatra ahitàna ireo torohay mikasika ny fahasalamana no tena fanalahidin'ny fifehezana sy ny fihazonana ny fahalalàna eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana, ny fiovàna amin'ny fitondrantena, ny fifehezana ny fahalalàna dizitaly ary tena zava-dehibe amin'ny famahàna ireo fanamby sôsialy maro. Anatin'ity tetikasa ity dia katsahanay ny hamaha ny lanjan'izany fidirana amin'ny aterneto izany, amin'ny alàlan'ny fanomezana fidirana malalaka amin'ireo votoaty nomerika ankoatry ny lahatsary anaty tranonkala sy ny fidirana aminà lohamilina iray ao an-toerana natao ho an'ny lahatsary, miaraka amina drafitra fanapariahana isam-paritra manana na tsia fotodrafitrasa, amin'ny ankapobeny. akaikin'ireo tobim-pahasalamana, ivontoeram-pampianarana, ary toeram-pivoriana ho an'ny daholobe.
Ny Internet lite dia zanaka nomerikan'ny fidirana tsy manavakavaka amin'ny fampiatiana nomerika (DigI), izay tetikasam-pamoronana tanterahina mandritry ny telo taona, famatsiambola avy amin”ny The Research Council of Norway sy ny Minisitera Norveziàana misahana ny Raharaham-bahiny. Vakio bebe kokoa ny momba ny tetikasa DigI sy ny Basic Internet Foundation ao amin'ny tranonkalanay.
Ny ohatra ao amin'ny lisean'i Migoli sy ireo hetsika ataony amin'izao fotoana izao
Tamin'ity taona ity, nametraka ny Internet lite tao amin'ny lisea ao Migoli izahay. Ahitàna mpianatra miisa 1271 ny lisea ao Migoli (Aprily 2019) ary mpampianatra raikitra miisa 35. 3 kilometatra miala an'i Migoli no misy ilay lisea, ao amin'ny distrikan'i Iringa, ao Tanzania. Na dia misy andry mamatsy fifandraisana finday 3G aza eo akaiky eo, izay avy amin'ireo mpandraharaha maro, dia mbola tsy manana aterineto foana ilay sekoly.
Ny fotodrafitrasan'ny Internet Lite nataonay dia ahafahana manome fidirana feno amin'ireo lahatsoratra, sary ary lahatsary eo an-toerana, ary mifanaraka tsara mba hanomezana ny torohay ilaina amin'ny fandraisana anjara amin'ny tontolo nomerika. Koa satria tianay hifandray ihany koa ireo ireotoerana hafa fizaràna torohay ao Migoli, dia nanangana fotodrafitrasa fanampiny araka izany izahay. Manova ny tambajotra 3G ho aterineto ilay tandroka manaraka fitodika (antenne directionnelle), ary mampidina izany ho ao amin'ny Local Network Control Centre (LNCC) ao aminay. Ny LNCC no mamerina mizara ny Internet Lite any amin'ireo tandroky ny faritra miteronterona any ambonin'ny andry iray mirefy 9 m, miantoka ny fizarana manerana ny faritry ny oniversite ary mamatsy aterineto ny tanàna iray manontolo ihany koa. Vakio bebe kokoa ny momba ny fotodrafitrasa ao amin'ny BasicInternet.no/Solutions.
Ohatra iray ihany io, fa mametraka toerana ahafahana mandray ny aterineto sy mahazo torohay ao Iringa izahay izao. Mitohy izao ny fandalinana DigI-Iringa miaraka amin'ny fanangonana angon-drakitra eny an-kianja, ary vao haingana no namita ny tombana voalohany sy ny tombana teo noho eo ireo mpanao fanadihadiana. Hanome antsika fampahalalana manan-danja mifandraika amin'ny fiantraikan'ity firotsahana ara-pahasalamàna nomerika ity izany.
Nanomboka ny 1 Aprily lasa teo ny fanangonana angon-drakitra, miaraka amin'i Migoli, ilay anaovana ny firotsahana. Avy eo nifindra tao Izazi ilay ekipa, ary avy eo nankany amin'ireo vohitra hafa, Kimande sy Idodi. Ny ekipa manangona angon-drakitra dia ahitàna ireo manana talenta ara-pikarohana izay mifandray amin'ny NIMR na Muhimbilli, ao Dar es Salaam. Ny fahatsapàna ankapobeny dia tena mahaliana ny olona rehetra ny firotsahana ara-pahasalamana nomerika ary ireo olona any amin'ireo vohitra anaovana ny firotsahana dia manantena ny hampiasa ilay sehatra ao am-bohitra
Amin'izao fotoana izao, manomboka ny fandefasana ilay sehatra ao am-bohitra izahay, nasiana toerana ahafahana mandray ny aterineto ao Izazi sy Migoli, ary mamarana ny fandefasana ilay sehatra am-bohitra asiana fandefasana hafatra momba ny fahasalamàna.
Ny fandraisanay anjara tamin'ny tatitr'ilay fakankevitra faratampon'ny Firenena Mikambana
Fihaonana fandefasana voalohany ny DigI, Oslo, 2017
Ny 06/10/2019, ny fakan-kevitra faratampon'ny Firenena Mikambana momba ny Fiarahamiasa Nomerika dia namoaka ny tatitra farany nataony nahitàna ireo tolokeviny izay misy ny filazana ny Basic Internet Foundation, miaraka amin'ilay ezaka tetikasa DigI nataony manerana izao tontolo izay toerana tsara ho toy ny ohatra iray tonga lafatra amin'ny fampiatiana nomerina erantany sy ny famoronana fidirana amin'ny aterneto mifanaraka ami'ireo filan'ny vondrompiarahamonina. Azonao vakiana eto ilay tatitra.
Rehefa navoaka ny tatitra “Taonan'ny Fahaleovantena Nomerika”, momba ny fampiaiana dizitaly amin'ny hoavy, navoakan'ny Digital Cooperation, nanaitra ny sain'ny rehetra ny Sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana, António Guterres, hoe tokony hiaraka hiasa ny governemanta, ny akademia ary ny sehatra sivily hisian'ny fampiatiana nomerika ary hampihenana ireo endrika elanelana isankarazany. Tohananay tanteraka izany. Nomem-boninahitra tamin'ilay Fakàn-kevitra Faratampon'ny Firenena Mikana ny ezaka fampiatiana nomerika ataonay ao amin'ny #SDG3 Fahasalamana sy #SDG4 Fampianarana, izany isaorana i Nikolai Astrup, Minisitry ny Nomerika (Norvezy), Vint Cerf, (Google) ary ireo mpikambana tamin'ilay fakàn-kevitra izay nankasitraka io fiarahamiasan'ireo mpitan-tsoroka io ary dia afaka ny ho velona tsara ny tetikasa DigI “Ny fidirana malalaka amin'ny fampahalalam-baovao ho an'ny rehetra”
Fehezin'ny fotkevitra hoe “Zo ny Aterineto” ny fampandehanana ilay fikambanana, izay mahatonga ho zavadehibe ny fandraisana anjaran'ilay vondrona fakàn-kevitra faratampon'ny Firenena Mikambana. Ny sasany amin'ireo fandraisana anjara farany, nisy koa tatitra iray momba ireo tolokevitra avy tamin'ilay dinika an-databatra boribory nanangonana ny ankamaroan'ireo mpisehatra manan-danja.
Antso ho amin’ ny fandraisana andraikitra sy ny fiarahamiasa
Ny modely Internet lite andràna dia afaka ampiasaina sy averina atao any amin'ireo firenena sy faritra kely fidirambola tsy manana aterineto mihitsy, na amin'ny hetsika ho an'ny daholobe anatin'ny habaka nomerika na tsy miankina, amin'ny alàlan'ny modely freemium (.fanolorana ireo tolotra fototra amin'ny endriny maimaimpoana saingy fampandoavana sarany ho anà tolotra sy tombony ambonimbony tsara kokoa)
Miankina amin'ny fiarahamiasa akaiky amin'ny olona ao an-toerana ny fampandrosoana nomerika any amin'ny Ilabolantany Atsimo. Na inona na inona tetikasa mombanà teknolojia nomerika kasaina, dia tokony mijery akaiky ny singa fototra misy ao an-toerana hatrany aloha vao mametraka paikady, manatanteraka ary manombatombana ny tetikasany izy ireo. Ny fanehoankevitra nomerika avy amin'ireo tranonkala sy fampiharana, ohatra, ireo antontanisa amin'ny fampiasana, ny fampiakarana anaty pejy, ireo mpampiasa tokana ary ny kitika dia tokony ampiasaina rehefa manombatombana ny votoatiny ao ambadik'izany. Io dia afaka manome fototra iray lehibe ho an'ny fanombanana ary ho an'ny fandrosoana sy ny fanatsaràna.
Na efa nametraka ny fampandehanana ny tambazotra any amin'ny tanàna sasany ao Tanzania aza izahay, mila ny fanampianao ihany hahafahana manome lohamilina ho ana sekoly sy vohitra iray hahazoana fitaovam-panabeazana ho an'ny rehetra ao amin'ilay toeram-ponenan'ny mpianatra, ary famatsiambola fanampiny ho an'ny fitaovana mandinidinika. Raha afaka manampy ianao dia mifandraisa amiko amin'ny alàlan'ny danica@basicinternet.org na amin'ny alalan'ny hafatra mivantana eto amin'ny Global Voices.
18 Oktobra 2019Mediam-bahoaka